Teknolojia · Jolay, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Jolay, 2010
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Jolay, 2010
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana15 Jolay 2010
Afrika Mainty13 Jolay 2010
Serbia: Angatahan'ny mpitoraka blaogy ny fametraham-pialàn'ny Minisitry ny Fahasalamana
Eoropa Afovoany & Atsinanana11 Jolay 2010
Nampisafoaka mafy ny vahoaka Serba sy ny fiarahamonin'ny fitorahana blaogy ny tantara ratsy mikasika kolikoly tao amin'ny Oncology Institute ao Belgrade. Danica Radisic manoratra momba ilay fandraisana andraiktra am-blaogy momba ny fametraham-pialàna (Ostavka) - sy ny fiandrandrana ny fialàn'ny Minisitry ny Fahasalamana Serba.
Filipina: Fandihizan'ireo gadra ho fahatsiarovana an'i Michael Jackson
nandihy tamin'ny hiran'i Michael Jackson ireo mpanao ratsy voaheloka tao Cebu tamin'ny fampisehoana fahatiarovana ny tsingerin-taonam-pahafatesana voalohan'ity mpihira malaza ity.
Sina: tranonkala iray fitadiavana asa nakatona noho ny fanohanana ny fitokonan'ny mpiasan'ny Honda
Shina03 Jolay 2010
Lahatsoratra navoakan'i Oiwan Lam amin'ny teny anglisy tao amin'ny tranonkala Advocacy Tamin'ny andro (8 Jona) rehefa namoaka ny taratasiny momba ny politikany mikasika ny aterineto ny Filankevi-pirenena Sinoa, manipika ny lanjan'ny hevitry ny olona ao amin'ny aterineto ho fanaraha-maso ny asam-panjakana, dia tranonkala fikarohan'asa iray (zggr.cn) no noterena hikatona noho...
Afrika Atsimo: Ny tontolon'ny media sosialin'ny vuvuzelas
Afrika Mainty02 Jolay 2010
Tsy afa-mahazo vuvuzelas bebe kokoa ve? Na koa ny mifanohitra amin'izay. Eto dia misy rohina media sosialy voatokana ho an'ny resaka vuvuzela.